Sweden/Denmark: Dhalinyaro soomaali ah oo loo qabtay dilka wiilal soomaali ah - NorSom News
Sweden/Denmark: Dhalinyaro soomaali ah oo loo qabtay dilka wiilal soomaali ah
Booliska dalka Denmark ayaa sheegay in booliska Sweden ay dhawaan usoo gacan galin doonaan 18-jir Swedish ah oo lala xiriiriniyo dilka wiilal soomaali ah oo duleedka Copenhagen lagu dilay.
Dhacdadan ayaa dabo socoto dilkii bilowgii bishan duleedka Copenhagen loogu geystay labo wiil oo soomaali ah, kuwaas oo dilkooda loo adeegsaday qoryaha fudud iyo biskoolado, sida ay boolisku sheegeen. Halkan kasii akhri
Kala xiriir 45970350 ama booqo webkooda: Riix sawirka kore.
Booliska Denmark ayaa sheegay in baaritaankooda ay ku ogaadeen in ugu yaraan shan ilaa lix qof ay ka danbeeyeen dilka labada wiil ee soomaalida ah, waxaana ilaa hada gacantooda soo galay isku dar shan qof.
Afar kamid ah shanta qof ee ilaa hada ay Booliska qabteen ayaa asalkoodu yahay soomaali heysatao dhalashada dalka Sweden, iyada oo kan shanaadna la sheegay inuu qaraabo la yahay mid kamid dhalinyarada xiran.
Denmark iyo booliska Sweden ayaa si wadajir ah uga wada shaqeynayo kiiskan.
Wiilashada la dilay iyo kuwa dilkooda loo qabtay ayay boolisku sheegeen inay ka tirsanyihiin labo kooxood oo “gangi ah”, kuwaas oo uu ka dhaxeeyo dagaal arxan daro ah.
Dhamaan wiilasha la qabtay iyo kuwa la dilay ee soomaalida ah ayaa da´doodu u dhaxeysaa 17 ilaa 23 sano.
Xigasho/kilde: 18-årig udleveret fra Sverige: Sigtes for dobbelt-mordet i Herlev.
Previous articleSweden: Diyaarad laga leeyahay Norway, ayaa hawadeena ku xadgudubtay.
Next article10 sano kadib ayaa meydkiisa laga helay dukaankii uu ka shaqeynayay.